कृषि Archives - Page2of3- Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
इन्द्र सरोवरको योगदानः बिजुली र पर्यट
कुलेखानी । कुलेखानी जलाशय अर्थात् इन्द्रसरोवर । मानवनिर्मित यस तालले देशलाई उज्यालो पार्नमा योगदान त वर्षौंदेखि दिएको छ नै, त्यसमाथि यहाँ आइपुग्ने जो कोहीलाई पनि मनै उज्यालो पार्ने गरी शीतलता र शान्ति पनि दिँदै आएको छ । मकवानपुर जिल्लाको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकास्थित कुलेखानी खोलामा निर्मित यस तालबाट कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको छ भने ताल पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र पनि...
काठमाडौं, ५ भदौं । कालिमाटी तरकारी बजारमा सोमबार दिनभर तनाव भयो । व्यापारीले चरम कालोबजारी गरेको सूचना पाएपछि मिर्मिरेमै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारी बजार अनुगमनमा पुगे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको ठाडो निर्देशनमै अनुमगमन टोली पुगेको थियो । तर, विभागका अधिकृत दीपकराज पोखरेल नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको टोलीलाई अनुगमन सहज भएन । बजारका स्टलमा तरकारीको भाउ बुझ्दै...
तेह्रथुम, २१ साउन । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले बसाइँ सरेर आउने नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँ इनाम दिने नीति लिएको छ । त्यतिमात्र नभई गाउँपालिकाले उनीहरुलाई ब्यावसायिक काम गरेमा ५ लाख रुपैयाँ अनुदान पनि दिने घोषणा गरेको छ । नेपालमै पहिलोपटक यस गाउँपालिकामा बसाइँ सरी आउने नागरिकलाई ब्यावसायिक अनुदान दिने कार्यक्रम तयार भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । नागरिकलाई ब्यावासयिक तथा गाउँपालिकामा रहेको नागरिकलाई आर्थिक...
चितवन – रत्ननगर नगरपालिका १५ माधवपुरस्थित लामिछाने कुखुरा फार्ममा एक सातामा तीन हजार सात सय भन्दा बढी कुखुरा मरेका छन् । त्यहाँ पालिएका पाँच हजार एक सय लोमेज जातको लेयर्स कुखुरामध्ये बिहीबार साँझसम्म चारवटा खोरका तीन हजार सात सय मरेका हुन् । चैत १५ गते बेलुका हावाहुरी अएपछि कुखुरा मर्न थालेको लामिछानेले बताए । त्यस दिन तीनवटा मरेका थिए, उनले भने, भोलिपल्ट...
काठमाडौं, फागुन । नेपाली उपभोक्ताको ज्यानै जाने गरी भारतबाट अत्यधिक विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी खुलेआम भित्रिरहेको छ। मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने भन्दै केही राष्ट्रले भारतीय तरकारी तथा फलफूल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहँदा नेपालमा भने परीक्षणबिनै निर्वाध आयात र बिक्री(वितरण भइरहेको हो। भारतीय तरकारी र फलफूलमा मापदण्डभन्दा सात सय ५० गुणा बढी विषादी भारतीय तरकारी, फलफूल र खाद्य पदार्थमा ५० पीपीबीभन्दा बढी परिमाणमा...
दिपक राईको पौरख, गरे के हुन्न र ?
जुडी, मण्डनमा,दिपक राईको पौरख तस्बिर : प्रकास सुन्दास ...
भारतीय अवरोधले सड्ने भयो तीन करोडको अदुवा
काठमाडौं, १० माघ । भारतले अवरोध गरेपछि निकासीका लागि तयार पारिएको करिब तीन करोड रुपैयाँको अदुवा नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ । अवरोधका कारण निकासी गर्न ६५ ट्रकमा लोड भएको नौ सय टन काँचो अदुवा बिग्रन लागेको हो । यो अदुवाको बजार मूल्य करिब दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ पर्ने व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् । यसबाहेक थप तीन चौथाईभन्दा...
सरकारले बाड्यो सवा करोड रुपाँया गाईभैसी सुत्केरी भत्ता,
काठमाडौं। सरकारले गत वर्ष र यो वर्ष गरी गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ताबापत सवा करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ। गत वर्षदेखि सुरु भएको कार्यक्रमका लागि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहतको पशु उत्पादन निर्देशनालयले यो वर्ष ४० जिल्लाका ४ हजार किसानलाई गाई–भैँसी सुत्केरी भत्ताबापत १ करोड रुपैयाँ स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरेको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा किसानले गाई–भैंसी सुत्केरी भत्ताबापत २३ लाख रुपैयाँ...
तरकारीको मूल्यले आकाश छोयो ? किन बढ्यो त मूल्य ?
२२ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंमा तरकारीको मूल्यले नयाँ रेकर्ड राखेको छ । आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रहेकै अवस्थामा तरकारीको मूल्य आकासिएको हो । सामान्य अवस्थामा यसरी अधिकाशं तरकारी एकैपटक तरकारी महंगो विन्दुमा पुगेको थिएन । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठका अनुसार तरकारीको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेर लगातार बढ्दो क्रममा देखिएको पहिलोपटक हो । ‘तरकारीको मूल्य घटबढ भइरहन्छ...
कोरियामा नेपाली कृषिमा लगानी सम्भावना खोज्न अन्तर्कृया गरिदैँ
शिब भुसाल, दक्षिण कोरिया, सउल । नेपालमा उपयुक्त कृषि क्षेत्रको पहिचान गरि, गर्न सकिने लगानिका सम्भावना बारेमा कोरियाको सउलमा अन्तरक्रिया गरिने भएको छ । कोरियाको किम्हे माईग्रेण्ट हाउस, नेपाल पत्रकार महासंघ कोरिया शाखा र एसिया फोरम नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न लागेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा रहेका सम्भावना, कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणसँगै लगानिकालागि उपयुक्त क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको...